DAAWO SAWIRO:- Hakad la geliyay Dhaqdhaqaaqa dadwaynaha Muqdisho iyo xuska laba sano guuradii qaraxii Zoobe. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDAAWO SAWIRO:- Hakad la geliyay Dhaqdhaqaaqa dadwaynaha Muqdisho iyo xuska laba sano guuradii qaraxii Zoobe.
DAAWO SAWIRO:- Hakad la geliyay Dhaqdhaqaaqa dadwaynaha Muqdisho iyo xuska laba sano guuradii qaraxii Zoobe.
Waddada Muhiimka ah ee Maka Al-Mukarrama ayaa waxaa ay maanta guud ahaan u xirantahay xuska Qaraxii Soobe ee dhacay labo Sano ka hor.
Gaadiidka ka imanaya Madiina iyo Afgooye ayaa waxaa ay ku kala egyihiin Isgoysyada Danwadaagta iyo Seybiyaano ee Degmooyinka Wadajir iyo Hodon.
Dadweynaha ka kala imanaya labadaas waddo ee u shaqo tagaya gudaha magaalada ayaa lugeynaya iyada oo aysan jirin waxgaadiid ah oo maraya waddadaas marka laga reebo gaadiidka dowladda, kuwa Gurmadka iyo wixii la mid ah.
Shaqaalo ka tirsan Gobolka Banaadir ayaa saaka dhaqay Isgoyska Soobe halkaas oo sidoo kale la soo dhigay Gawaarida dab damiska iyo kuwa gurmadka.
Labo sano ayaa ka soo wareegtay qaraxii 14kii October ka dhacay Muqdisho kaas oo galaaftay nolosha dad kor u dhaafay 600 oo qof oo rayid ahaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa dib u habeyn ku sameysay Taallada 14ka October ee la dhisay sanadkii 2018 waxaana lagu wadaa in maanta halkaas lagu qabto xus baroor diiq ah oo loogu duceynayo dadkii ku dhintay weerarkii 14kii October.
Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarkii 14ka October ee ka dhacay Muqdisho labo sano ka hor.
Waxaa uu ahaa Qaraxii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Taariikhda Afrika oo dhan,waxaana uu ahaa weerarka 2aad ee ugu dhimashada badnaa taariikhda Caalamka oo dhan,waxaana kaliya ka dhimasho badnaa weerarkii 11kii September ka dhacay Mareykanka oo ay ku geeriyoodeen ilaa 3000 oo qof.
Sargaal kasoo goostay Alshabaab iskuna dhiibay Axmed Madoobe oo xalay lagu dilay Bartamaha Kismaayo.